Archive du 20170410
Kolikoly avo lenta Mpanolotsain�ny Filoha 2 hosamborina
Miha mangotraka ny raharaha kolikoly mahasaringotra ireo mpanolotsain�ny filoham-pirenena.
Fikambanana FITEVA Nahavory firehana samihafa
Azo ambara fa tontosa ny fanambin�ny fikambanana FITEVA na Fikambanana Ifanampian�ny TErak�i VAkinankaratra sampana
Claudine Razaimamonjy Tsy mahazaka fiaramanidina
Tsy mbola fantatra mazava hatramin�izao izay tena mahazo ilay mpandraharaha vaventy voarohirohy tamin�ny resaka kolikoly avo lenta, Claudine Razaimamonjy.
Rivo Rakotovao �Vonona hiady izahay�
Nohararaotin�ny filohan�ny antoko Hvm, Rivo Rakotovao, ny zaikabe provinsialin�ny antoko tao Toamasina ny sabotsy tontolo andro teo natao tao amin�ny kianja mitafon�i Soavita,
Taratasin�i Jean Nijoboka
Jean kely tsy nahay nilomano� nijoboka ! Jean be koa ity toa nanao angano�
Fanakorontanana teny amin�ny Bianco �Fa taiza Ravoavy sy Florens ? �, hoy i Alain Andriamiseza
Tsy tapitra hatreo ny resaka momba ny zava-niseho teny amin�ny Bianco Ambohibao ny herinandro lasa teo, izay nisian�ny herisetra sy ny fikomiana nentina nitakiana ny famoahana an�i Claudine Razaimamonjy.
Kenianina mampiahiahy Naverina nody any an-tanindrazany
Lehilahy iray, teratany Kenianina no nosamborina tao amina hotely iray eny Tsaralalana, omaly antoandro.
Harona plastika mihoatra ny 50 microns Niakatra avo roa heny ny vidiny
Misedra olana tanteraka ireo mpivarotra harona plastika eto an-drenivohitra amin�izao fotoana izao.
Vahoakan�Antsirinala Manohitra ny fananganana �Pyl�ne� ao an-tan�na
Nampisavorovoro ny mponina ao amin'ny fokontany Antsirinala, kaominina Ambohibary, distrikan'i Moramanga ny fisian�ny tetikasa fananganana andrimby na �pyl�ne� ao an-tan�na.
Aza asiana tombo sy hala e !
Mafampana ny raharaha kolikoly avo lenta mahasaringotra ilay vehivavy mpanolotsain�ny filoha.
Antenimieran�ny varotra sy ny indostria Niteraka resa-be ny fifidianana tao Antsirabe
Notontosaina ny alahady 9 aprily 2017 ny fifidianana ireo mpikambana 34 handrafitra ny mpifidy vaventy eo anivon�ny antenimieran�ny Varotra sy ny indostria - Vakinankaratra.